अन्जु पन्तलार्इ नियतीले पनि कति ठग्छ? – Rastriyapatrika
अन्जु पन्तलार्इ नियतीले पनि कति ठग्छ?
किनकि उनलाई जीवन एउटा लोला जस्तै लाग्छ । कहाँ कति बेला प्याट्ट फुट्ने हो कुनै ठेगान छैन । ‘किन बुन्नु सपना किन बनाउने योजना ? किन देखाउने दम्भ ?’ उनले प्रश्न गरिन् । मान्छेहरूले घमण्ड देखाएको देख्दा अचम्म लाग्छ उनलाई । ‘एक सेकेन्डपछि के हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन तैपनि मान्छेले दम्भ देखाउन छाड्दैन,’ उनले भनिन् । Blast Times